Ikhekhe lokutya kunye neNutella, ikeyiki esityebileyo kwaye kulula kakhulu ukuyilungiselela !!!! | Ukupheka kweKhitshi
Ikhekhe le-Wafer kunye ne-Nutella, ikeyiki elula ukuyilungisa, ayifuni i-oveni kwaye imnandiUya kuyazi njengekhekhe elincinci lamathambo, kuba lifana kakhulu neicookies.
Ikeyiki ekhawulezayo ukuba sifuna kuphela izithako ezibini kunye nexesha elungileyo kwi ice creamay izakulunga. Ngobushushu ongafuniyo ukuvula i-oveni, le khekhe intle, kulunge kakhulu ukubhiyozela usuku lokuzalwa, amatheko okanye amashwamshwam athandwa kakhulu ngabantwana.
Izonkana ezisicaba ezisetyenziselwa le khekhe zithengiswa kwiivenkile ezinkulu, ungasebenzisa enye cream cream.
Ipakethi enye yeefers
Ingqayi enye yeNutella engama-1 gr.
Ukuhombisa iibhola, ishavings emhlophe yetshokholethi, amandongomane ...
Sibeka indawo enkulu yekrimu kwisitya kwaye siyifaka kwi-microwave okomzuzu okanye emibini, kukuyenza nje ukuba ibe lulwelo kwaye ithambe kwaye ikwazi ukuyiphatha ngcono, siya kuyenza kabini.
Sithatha iplate apho sizobeka khona ikeyiki. Sasaza isiseko kunye nentwana yekrimu yeNutella kwaye ubeke isiciko ngaphezulu, iya kunamathela.
Sasaza isonkana sokuqala ngeNutella ngespatula, uyikhathalele ukuba ayophuli, sibeka esinye isonkxiweyo, sisasaze ngekhrimu kwaye ke siyakutshintsha ikrimu kunye nezonkana ezishushu kude kube kubude esifuna ukuba ikeyiki ibe yiyo.
Kwisangqa sokugqibela siza kubeka umaleko onesisa weNutella kwaye siya kuyigubungela yonke indawo kunye namacala kakuhle, siya kuyishiya yonke into igudile nge-spatula yokuhombisa.
Beka itshokholethi ephezulu okanye iibhola ezinemibala okanye ishevings, amandongomane okanye nantoni na oyithandayo, enamathela kakuhle, siza kuyibeka efrijini iiyure ezimbalwa ukuze itshokholethi iqine. Kuya kuba crispy kwaye kulungile kakhulu ukusika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » ngokubanzi » Ikhekhe lokutya kunye neNutella
Elisabeth acosta sitsho
Ithetha ntoni i-WAFERS Ithetha ngekuki. Nceda uthumele ifoto njengoko ndikubhalela ivela e-El Salvador kwaye apha asibizi POZUELO RELLENAS iikeyiki zokugcwala. Kukho ezinye ezingqukuva ezibizwa ngokuba yi-SUSPIROS kunye nezinye ii-BISCUITS MARIAS ezixineneyo.
NCEDA UMFOTO WOKUBA YINTONI I-WAFER. UNUTELLA UKUBA UTHENGISA KAKHULU. Enkosi
Phendula uElizabeth Acosta
Njengoko ndingenako ukufaka iifoto ngaphakathi kwezimvo, ndiza kukushiya ikhonkco kwiphepha apho ndineli nyathelo lekhekhe ngenyathelo. Yibhlog yam.
Ndiyathemba ukuba uyakuzifumana ii-cookies kwaye ungazenza, ukuba akunjalo ungazenza kunye neicookies ezisikwere ezisetyenziselwa ukusikwa kwe-ice cream.